“သက်ကြီး မုဒိမ်း တရားခံ နံရိုးနဲ့လက်ကျိုးအောင် ရိုက်နှက်ခံရ” – ရှအေလငျး
“သက်ကြီး မုဒိမ်း တရားခံ နံရိုးနဲ့လက်ကျိုးအောင် ရိုက်နှက်ခံရ”
ထိုင်းတောင်ပိုင်း သရမ်ခရိုင်မှာ ၈၉ နှစ် အရွယ်အဖွားအိုကို အိမ်သားတွေမရှိကြတဲ့အချိန် ရိုက်နှက် မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ တရားခံ Yap Chaiphak ရစ်ချိုင်းပတ် အသက် ၇၁ ဟာ အိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်ပြီး သမီးဖြစ်သူအပြင် သွားနေတဲ့အချိန် အိမ်ေ၇ှ့ မှာ လဲအိပ်နေတဲ့ အဖွားရဲ့ဗိုက်ကိုထိုးကြိတ်ပြီး မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ပါတယ်။
သမီးပြန်လာတဲ့အခါ အဖွားဟာ အော်ဟစ်ငိုနေပြီး ငရစ်ငါ့ကို လက်သီးနဲ့ ထိုးပြီး မုဒိမ်းကျင့်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်၊ သမီးက တရားခံ မုဒိမ်းအဖိုးကို လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာ သူ့ မသိ သူနဲ့ မဆိုင် အဖွားကြီး ငယ်မူပြန်ပြီး ပြောနေတာလို့ငြင်းဆိုပြီးပြန်ရန်တွေ့ နေတာကို
မုဒိမ်းကျင့်ခံရတဲ့ အဖွားအိုရဲ့ မြေးက စိတ်မထိမ်းနိုင်ဖြစ်ပြီး ရိုက်နှက်လိုက်လို့ ရဲတွေရောက်မလာခင် မုဒိမ်းအဖိုး ဟာ နံရိုးနဲ့လက်ကျိုးပြီး ဆေးရုံတင်ခဲ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။
အဖွားရဲ့သားအိမ်အတွင်း မှာ ဒဏ်ရာတွေ့ ရပြီး သုတ်ရည် ကျန်နေခဲ့တဲ့ ဆေးရုံရဲ့ဆးစစ်ချက်အရ တရားခံ မုဒိမ်းအဖိုးကို ဆေးရုံကနေရဲစခန်းခေါ်လာပြီး ဆက်လက်စစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ (ဓါတ်ပုံ တရားခံ မုးဒိမ်း အဖိုးကို ဆေးရုံမှ ရဲစခန်းကိုပွေ့ ချီ ခေါ်လာနေစဉ်)
Police in Trang in southern Thailand have arresteda71 year old man after he admitted raping an 89 year old neighbor.
But when the Palian constabulary arrived some measure of “justice” had already been meted out to rapist old man was beat to broken hand and ribs by grand daughter of rape victim .
Credit: Social Action for Children and Women – SAW
ထိုငျးတောငျပိုငျး သရမျခရိုငျမှာ ၈၉ နှဈ အရှယျအဖှားအိုကို အိမျသားတှမေရှိကွတဲ့အခြိနျ ရိုကျနှကျ မုဒိမျးကငျြ့ခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။
မုဒိမျးကငျြ့တဲ့ တရားခံ Yap Chaiphak ရဈခြိုငျးပတျ အသကျ ၇၁ ဟာ အိမျနီးခငျြးတှဖွေဈပွီး သမီးဖွဈသူအပွငျ သှားနတေဲ့အခြိနျ အိမျရှမှေ့ာ လဲအိပျနတေဲ့ အဖှားရဲ့ ဗိုကျကိုထိုးကွိတျပွီး မုဒိမျးကငျြ့ခဲ့ပါတယျ။
သမီးပွနျလာတဲ့အခါ အဖှားဟာ အျောဟဈငိုနပွေီး ငရဈငါ့ကို လကျသီးနဲ့ထိုးပွီး မုဒိမျးကငျြ့တယျလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ၊ သမီးက တရားခံ မုဒိမျးအဖိုးကို လိုကျရှာတဲ့အခါမှာ သူ့မသိ သူနဲ့မဆိုငျ အဖှားကွီး ငယျမူပွနျပွီး ပွောနတောလို့ ငွငျးဆိုပွီးပွနျရနျတှနေ့တောကို
မုဒိမျးကငျြ့ခံရတဲ့ အဖှားအိုရဲ့မွေးက စိတျမထိမျးနိုငျဖွဈပွီး ရိုကျနှကျလိုကျလို့ရဲတှရေောကျမလာခငျ မုဒိမျးအဖိုး ဟာ နံရိုးနဲ့ လကျကြိုးပွီး ဆေးရုံတငျခဲ့ရကွောငျး သိရပါတယျ။
အဖှားရဲ့ သားအိမျအတှငျး မှာ ဒဏျရာတှရေ့ပွီး သုတျရညျ ကနျြနခေဲ့တဲ့ ဆေးရုံရဲ့ ဆးစဈခကျြအရ တရားခံ မုဒိမျးအဖိုးကို ဆေးရုံကနရေဲစခနျးချေါလာပွီး ဆကျလကျစဈဆေးနပွေီဖွဈပါတယျ။ (ဓါတျပုံ တရားခံ မုးဒိမျး အဖိုးကို ဆေးရုံမှ ရဲစခနျးကိုပှခြေီ့ ချေါလာနစေဉျ)
ကုနျစုံဆိုငျတဈခုထဲကို ဝငျမိလို့ ဒျေါလာ ( ၁ )သနျးပေးရတော့မယျ့ အမြိုးသမီးတဈဦး
Mobile Legend… ဆော့ရင်း….ချစ်ခဲ့ကြတာဆိုတဲ့… အောင်သူနဲ့…...
မိန်းမ မတက်ရတဲ့ ဘုရားများဆိုသည်မှာ
ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို သိပ်လိုချင်ခဲ့တာဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ